Maamulka Puntland Oo Xabsiga U Taxaabay In Kabadan 50 Qof Oo Isugu Jira Odayaal Iyo Ganacsato | Araweelo News Network (Archive) -
Maamulka Puntland Oo Xabsiga U Taxaabay In Kabadan 50 Qof Oo Isugu Jira Odayaal Iyo Ganacsato
Boosaaso(ANN) Maamul goboleedka Puntland ee xaruntiisu Magaalada Garoowe ayaa maanta xabiga u taxaabay in ka badan 50-qof oo isugu jira Odayaal dhaqameed ah, ganacsato iyo aqoonayahano, kuwaas
oo ka kala tirsan deegaamo maalmihii lasoo dhaafay dilal ku dhexmareen Magaalada Bossaso iyo Deegaamada hoos yimaada Degmada Ufayn ee Gobolka Bari.
Xadhiga Odayaal dhaqameedka ayaa yimi kadib markii galabta loogu yeedhay Odayaasha iyo Ganacsatada Deegaamada dagaalamay inay isugu yimaadaan gogol nabadeed, isla markaana xilligii ay halkaasi tageen mar keliya lagu daabulay Gawaadhida Shabaqlayaasha ee ay isticmaalaan Ciidamada Booliska Puntland iyadoo aan la garanayn meesha la geeyey ilaa iyo xilligan, waxaana jira warar kala duwan oo kasoo baxaya goobta dadkaasi isugu jira Odayaal dhaqameedka iyo ganacsatada lageeyey.
Maaamulka Puntland ee Madaxweyne Farroole ayaa ku talaabsatay xadhiga Odayaal dhaqameedka kadib markii ay ku guuldaraysteen daminta dilal iyo dagaallo deegaamada ay kasoo kala jeedaan ku dhexmaray qaybo kamid ah Gobolka iyo Magaalada Bossaso, iyadoo maanta oo ugu dambaysay uu Magaalada ka dhacay dil loo gaystay ganacsade katirsan mid kamid ah labada dhinac.
Sidoo kale saraakiisha Booliska ayaa waxa ay ku eedeeyeen odayaal dhaqameedka hurinta colaadda dhextaala labada deegaan , iyadoo mar hore labada deegaan loo dhex dhigay heshiisyo nabadeed, kuwaas oo xilligan noqday hal bacaad lagu lisay, kadib markii ay u hooggaansami waayeen qaar kamid ah waxgaradka labada dhinac wixii lagu heshiiyey, taasina waxay sababtay in ay dib usoo cusboonaato colaaddii labada dhinac.
Saraakiisha Dawladda u qaabilsan dhinaca ammaanka Magaalada Bossaso ayaa waxa ay sheegeen in Odayaal dhaqameedka iyo ganacsatada xabsiga loo taxaabay kusugan yihiin gacanta Dawladda, waxayna intaa raaciyeen in xadhigoodu ka danbeeyay go’aan kasoo baxay madaxda sare ee maamulka Puntland.
Sikastaba colaada u dhaxaysa labadaa deegaan ayaa saamayn ku yeelatay magaalada dekedda ah ee Boosaaso, iyadoo colaada ka taagan deegaanada labada dhinac soo gasho magaalada dhexdeeda, taas oo si weyn u dhaawacday amaanka magaalada. Wuxuuna xadhigoodu kusoo beegmay xilli ay Magaalada si goonni goonni ah uga socdaan dadaallo la doonaayo in lagu qaboojiyo colaadda labada dhinac.